BancaNEO - Otu ngwa, ego niile
Ezigbo ụlọ akụ na ekwentị gị
E mere ka ụlọ akụ dijitalụ dị mfe
Na-enweghị ego ma ọ bụ nkwụnye ego chọrọ, BancaNEO bụ akaụntụ akụ maka mmadụ niile. Otu akaụntụ, otu kaadị, otu ngwa.
Mepee Akaụntụ Nkeonwe
Mepee Akaụntụ Azụmaahịa
Ụlọ akụ nkeonwe na nke azụmahịa, na mkpịsị aka gị
Nchekwa & ụda
Nchekwa ego site na iji 3D echekwa na 2FA
Tinye akwụkwọ maka azụmahịa ma ọ bụ akaụntụ nkeonwe
Jikwaa kaadị n'ime ngwa, naanị mgbata
Enweghị ego ma ọ bụ nkwụnye ego chọrọ
Tinye ego n'aka gị
Soro ego gị niile n'otu ebe wee mee ka mmefu gị kwa ụbọchị bụrụ nke enweghị nkebi.
Mepee Akaụntụ Nkeonwe Gị
Ụdị ụlọ akụ ọhụrụ
Nyochaa ike nke ụlọ akụ dị mfe na nke kacha mara amara n'ịntanetị.
Mepee Akaụntụ Azụmahịa Gị
Ngwa ngwa mgbanwe ego
ụlọ akụ na ụzụ
Ọ dị mfe dị ka mgbe ọ bụla!
Mepụta akaụntụ site n'ịgwa anyị onye ị bụ;
Budata ngwa ahụ site na Ụlọ Ahịa Apple App ma ọ bụ Ụlọ Ahịa Google Play;
Nyochaa onye ị bụ site na ịdekọ obere vidiyo selfie wee see foto nke ID gị.
Mepee Akaụntụ Onwe Gị
Ghọta na mmefu ego gị nke ọma
Kensinammuo mobile interface Mee ma soro usoro ego gị na mkpịsị aka gị, 24/7.
IBAN ọtụtụ ego jikọtara gị BancaNEO akaụntụ na-enye gị ohere ịzụ ahịa na mba ụwa na ego 38, na-emegheghị akaụntụ dị iche iche maka nke ọ bụla n'ime ha.
Nchekwa & ụda Atụmatụ nchekwa smart iji chekwaa ego gị. Anyị na-agbaso ụkpụrụ nchekwa EMI kachasị elu iji chekwaa ego gị na data nkeonwe gị.
Nkwado dị egwu na enyi
Mba, Silicon Valley - chinchi abụghị atụmatụ. Mepụta maka okwu teknụzụ, kesaa nzaghachi gị ma ọ bụ jụọ anyị maka ebe nri ehihie kachasị amasị anyị na Miami. Anyị nọ ebe a n'agbanyeghị ihe.
Ndị mmadụ hụrụ anyị n'anya!
Lelee akụkọ ịga nke ọma ndị ahịa anyị
Ezigbo ụlọ akụ njedebe iji dozie ya. Ndị ọrụ niile bụ ndị ọkachamara na ndị maara ihe. Ahụmahụ ụlọ akụ ha n'ịntanetị dị mfe na enyi.
Anita,BancaNEO Onye ọrụ
Daalụ nke ukwuu maka ndị ọrụ ndị ahịa na BancaNEO maka ime ka usoro a dị mfe!
Enyemaka ndị ahịa na-enye masịrị m nke ukwuu BancaNEO!
Mgbe ọ bụla m nwere ajụjụ ma ọ bụ chọrọ enyemaka ọzọ, enwere m ike ịkpọtụrụ mmadụ wee nweta azịza ngwa ngwa. Enwere m ahụmịhe dị mma n'izu a ma chọọ ikesa.
Unknown- Onye ahịa obi ụtọ
Ohia mgbe ị na-azụ ahịa!
Maka akaụntụ ụlọ akụ ọ bụla emepere, BancaNEO na-akụ osisi
Tụgharịa azụmahịa ọ bụla ka ọ bụrụ omume dị mma
Anyị na ndị mmekọ na-eduga n'ịkpụgharị ọhịa na-arụkọ ọrụ gburugburu ụwa
BancaNEO na-arụ ọrụ na Tree-Nation bụ ebe obibi 90 akuku oru si 33 dị iche iche mba.
184 673 osisi kụrụ na Kenya
Osisi 42 336 kụrụ na Madagascar
Osisi 163 710 kụrụ na Burkina Faso
Osisi 47 485 kụrụ na Colombia
Akụrụngwa iji mee ka ị mara
Gụọ ihe ndị na BancaNEO blog
Nkwekọrịta atụmatụ dị n'etiti My NEO Group na Crypto Expo Milano
My NEO Group na-ekwupụta nkwekọrịta atụmatụ ya na Crypto Expo Milan (CEM), ihe omume a raara nye Blockchain, Crypto, Ecosystems De.fi, NFT, Metaverse na Web 3.0, nke ga-eme na Milan site na 23 ruo 26 June 2022. CEM na-akwalite ahụmịhe nke internaNonal Crypto Community ma na-achịkọta uche mara mma, ụdị nnukwu ụdị, ndị na-agbanwe egwuregwu, ndị okike, ndị na-etinye ego…
Kedu ihe ga -abụ “nnukwu ihe” na -esote na ego na 2022?
Anyị na-ekwu ịkwụ ụgwọ biometric. 2021 na-eweta mgbanwe dị ukwuu na ọrụ ego n'ihe gbasara dijitalụ. Ndị ahịa na-abawanye na-adabere na ọrụ ịntanetị yana teknụzụ ahaziri ahazi, nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịgbasa ndị na-ege ha ntị ma too ngwa ngwa. Dị ka ndị ọkachamara si kwuo, ahịa ọrụ ego ka atọrọ ka ọ ga-eru $26.5 trillion site na 2022. Fintech innovations ...
FORBES - Mickael Mosse Nkwekọrịta nkwa iji were zụta ụlọ akụ n'ịntanetị BancaNEO
Onye ọchụnta ego France na-eto eto Mickael Mosse na-eduga ọgbakọ ọgbara ọhụrụ iji jeere ndị na-enweghị ego ozi ma nye ọrụ ọrụ ego pụrụiche maka azụmaahịa. “Anyị ebughị ụzọ wuo ụlọ akụ̀. Anyị malitere iwulite ụwa ka mma. Nke ahụ nwere ike ịpụtakwu ego n'akpa gị - yana ike karịa ime ihe ọma n'aka gị…"
Ma chee echiche na mgbanwe ego niile bụ otu?
Nweta nkwalite gaa na ọnụego mgbanwe yana usoro ahaziri ahazi, dabere na ọnụọgụ na ugboro ole azụmahịa gị. Nwee obi ụtọ ọnụahịa kachasị asọmpi maka mmekọrịta anyị na ọtụtụ ndị na-eweta ya. Ego anyị na-akwado ịnyefe ọtụtụ ego mere ka ọ dị mfe IBAN ọtụtụ ego jikọtara na akaụntụ Satchel gị na-enye gị ohere ịzụ ahịa n'ụwa niile na ego 38, na-emegheghị iche…
Ndị mmekọ anyị na njikọta
NKE 40% Nkwụghachi ego
Soro NEO CIRCLE
Malite njem gị na nnwere onwe ego taa.
Soro NEO Circle UGBUA!